Ihe ịga nke ọma abụghị njem, ọ bụ njem. - Zig Ziglar - Kwuru Pedia
Ndụ na-atọ ụtọ n’ihi na anyị niile nwere nrọ na agụụ ihe dị iche iche anyị ga-achụ. Ọ na-eme ka anyị nwee mkpali ma na-ahapụ anyị ịnweta ọnọdụ dịgasị iche iche na ndụ na-eme ka anyị bụrụ ndị anyị bụ.
Anyị kwesịrị isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ka anyị wee nwee ike ịgbaso ụzọ ziri ezi maka ịbanye na nrọ anyị. Mana mmadu aghaghi ighota na anyi ekwesighi ikwusi ike ma obu mechie onwe anyi ozigbo anyi ruru ebum n’obi anyi. Anyị kwesịrị ịdị njikere inyochakwu ma nabata ọtụtụ ohere dị ugbu a n'ihu anyị.
Anyị kwesịrị icheta na inwe ihe ịga nke ọma abụghị otu iru ebe anyị na-aga. Ọ bụ ezie na anyị kwesịrị inwe afọ ojuju na ndụ, ọ dị mkpa mgbe niile ka ire ọkụ na-aga n'ihu - ọchịchọ ịmara na ịchọpụta ihe. Anyị ekwesịghị ịkwụsị onwe anyị ịchọpụta ihe na ndụ.
Ọ bụrụ na anyị were ihe ịga nke ọma ịbụ njem, mgbe ahụ anyị ga-aga n'ihu ịnyagharị. Nke a ga - eme ka ndụ anyị baa ọgaranya ma nyere anyị aka ịchọpụta ihe ndị ahụ nwere ike ịla. Ọ na-eme ka ndụ mmadụ nwekwuo ọ becauseụ n’ihi na ọ na-enyere anyị aka ịmatakwu onye ọ bụla, na-eme ka anyị mụta ihe.
Ọ na-enyekwa anyị ohere itinye aka na ọha mmadụ n'ụzọ niile anyị nwere ike. Ọ bụrụ na anyị nwere ike inye onyinye ma nwee mmetụta maka ndị chọrọ enyemaka anyị, anyị nwere ike ịsị na anyị enweela ihe ịga nke ọma. Ọzọkwa, ntinye aka a nwekwara nhọrọ enweghị nsọtụ iji leba anya.
Mmadu aghaghi achuta uzo ichota ohere ohuru na gaa n'ihu na-amụta ma na-eto. Ijigide njem nke imuta ihe bu ihe oma n’ezie.
Ebe ihe onyunyo na-egosi
Ntuziaka ndi ama ama ama
Njem nleta njem
Ihe na - akpali akpali banyere ihe ịga nke ọma
Quotes na - akpali akpali maka ihe ịga nke ọma n’ọrụ
Kwuru okwu banyere njem na nmeghari ya
Ntinye uche banyere oganihu na ogha n’iru
Otu banyere Oganiru Na Isi Ike
Na-ekwu okwu nke Ọma
Ntughari nke oma
Imagesga nke Ọma Na Ihe Omuma
Ihe ịga nke ọma Njikọ Njem
Ihe Nleta Ihe Nleta
Ccessga nke Ọma kwuru na okwu
Ihe ịga nke ọma na-ekwu maka ọrụ
Ga nke Ọma Na-egosi Onwe Ya
Okporo ụzọ siri ike na-edugakarị ebe ndị mara mma. - Zig Ziglar yitere okwu:
Mgbe i nwere okwukwe, olile anya na ihunanya, ị ga - azụlite ụmụ tozuru etozu n'ụwa ọjọọ. -…